Ukuphathwa Kwezenhlalo Nokuphikiswa | Martech Zone
NgoLwesibili, ngo-Mashi 2, i-2010 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Douglas Karr
Namuhla ekuseni bengifunda iphepha elimhlophe elitholakala kusayithi lika-Aprimo, ku ukuhlanganisa ezokuxhum.
Abathengisi akudingeki baqale phansi ukwakha amandla wokushintsha umdlalo wezinkundla zokuxhumana abe yingxube yezokuxhumana ekhona. Ngokuphatha imithombo yezokuxhumana njengokwengezwa kwemidiya entsha neWebhu 1.0, abathengisi basebenzisa amandla ayo amasha ngaphakathi komkhawulokudonsa wabo kanye nezinsizakusebenza.
Iphepha elimhlophe likhuluma nefayela le- izindima zokuthengisa nokumaketha kuguqulwa ngandlela thile. Abamakethi - ababengakaze baxhumane nomphakathi - manje sekudingeka ukuthi baxhumane futhi baphathe lo mphakathi esidlangalaleni. Kuzofanele bakufeze lokhu ngaphandle koqeqesho kunoma yini ukuphathwa kokuphikisa. Ngikhulumile ngalokhu naku- isethulo kuWebtrends Zibandakanye.
Ngasikhathi sinye, yethu abathengisi kulindeleke ukuthi bathathe izikhundla KumaSocial Media, ukusebenzisa amasu wokumaketha nokuxhumana okukodwa abangakaze bawenze aphelele.
Iphepha elimhlophe lenza izincomo ezine:
Sungula iphuzu lokugxila ngokubeka umuntu ovela kubasebenzi bezentengiso ukuthi aphathe ezokuxhumana. Lo muntu kufanele abe nesibopho sokwakha isu lokumaketha kwezokuxhumana nabantu, kufaka phakathi ukudala inqubo ezobeka imingcele lapho izimoto zizosetshenziswa khona, ukuthi zizophathwa kanjani, nokuthi abantu banikezwe bani ngokuya ngenqubomgomo yenkampani.
Hlanganyela neminye imisebenzi ababamba iqhaza kumjikelezo wokuthenga omkhulu, kufaka phakathi insizakalo yamakhasimende nokuphathwa kwemikhiqizo. Ngo-2010, izinkampani ezingaphezu kuka-60% ze-Fortune 1000 ezinewebhusayithi zizoba nohlobo oluthile lomphakathi oluku-inthanethi olungasetshenziselwa izinhloso zobudlelwano bamakhasimende. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi ukumaketha kutholakale iqhaza labezindaba zenhlalo ekuthengiseni kuqala imisebenzi evela kulabo abasebenza ngemuva kokuthunyelwa kwamakhasimende ukuqinisekisa ukuthi ubunikazi bunikezwa ngokufanele kuyo yonke imisebenzi ehlukahlukene ebamba iqhaza ekwenziweni kwesu elikhulu leCRM lenkampani.
Thola abantu abavela kubasebenzi bezokumaketha baziqeqeshele ukuthengisa, ikakhulukazi lezo ezihlanganyela ezinkundleni zokuxhumana ezivumela ukuxhumana komuntu ngamunye. Abamakethi abangenalo uqeqesho noma amava ku "ukuphathwa kokuphikiswa" basengozini enkulu ezweni lezokuxhumana, ngoba amakhasimende agxeka ngokukhululekile umhlinzeki nemikhiqizo yakhe ezinkundleni zomphakathi.
Yenza njengomxhumanisi nabaholi bezentengiso kanye nabathengisi abafisa ukubamba iqhaza ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ezindaweni lapho baxhumana khona bebaningi, futhi baqeqeshwe ngomhlahlandlela ofanayo wokuhlela onikezwe ochwepheshe bezokumaketha nezokuxhumana ukuqinisekisa ukuvikelwa komkhiqizo nemiyalezo engaguquguquki.
Nginikeze isiqondisi esithile abathengisi baqala ukusebenzisa i-Social Media - kepha imininingwane emhlophe iphuma kakhulu kumasu webhizinisi jikelele. Nami bengilokhu ukuya ekuqeqesheni ukuthengisa ngonyaka odlule futhi ngingahle ngiyincome kakhulu kubo bonke abathengisi! Ngixoxa noBill Godfrey, isikhulu esiphezulu se- I-Aprimo namuhla, futhi sizobe sixoxa ngalezi zenzakalo - funa ividiyo ezoza!
Isoftware edidiyelwe yokuthengisa, edingekayo ye-Aprimo inika amandla abathengisi be-B2C nabakwa-B2B ukuthi bakwazi ukuzulazula ngempumelelo indima eguqukayo yezokumaketha ngokulawula izabelomali nokusebenzisa imali, beqeda amasilo angaphakathi ngokuhamba komsebenzi okuhambisanayo nokwenza imikhankaso emisha yeziteshi eziningi ukushayela i-ROI elinganisekayo. ukusuka I-Aprimo Iwebhusayithi.
Tags: ukuphathwa kokuphikisaukuphikisa kokuthengisasocial mediaukuphathwa kokuphikisana nomphakathi
Mar 2, 2010 ku-10: 59 AM
Imithombo yezokuxhumana impela iyasheshisa ukucatshangelwa kabusha "kweminyango" njengoba yonke imigqa iba mnyama. Ilungele ibhizinisi.